Vehivavy mijanona an-trano ao Arzantina nanao fihetsiketsehana avy eny am-baravarakely noho ny firongatry ny famonoana vehivavy · Global Voices teny Malagasy
Tsy voahiboka ny herisetran-tsy fitiavam-behivavy.
Voadika ny 05 Mey 2020 4:17 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, русский, Ελληνικά, 繁體中文, Español
Pikantsary avy amin'ilay fandaharana tamin'ny 31 Martsa 2020, tao amin'ny fantsom-pahitalavitra YouTube Televisión Pública Noticias.
Jereo ny fitantarana manokana ataon'ny Global Voices momba ny fomba iadian'ny vehivavy amin'ny herisetra mifototra amin'ny lahy-vavy any Amerika Latina.
10 andro tsy maintsy nihibohana i Arzantina ho fepetra fisorohana ny COVID-19 rehefa nanambatra hery ny vehivavy hanoherana ny fitomboan'ny herisetra mifototra amin'ny mahalahy-vavy mandritra ny fihibohana. Tamin'ny 30 Martsa, amin'ny 6 ora hariva, voarakotry ny ruidazo ny tanàndehibe nanerana ny firenena rehefa nitabataba tamin'ny alàlan'ny kiririoka, sarom-bilany, vilany, sy ny fitaovana tao an-trano hafa teny am-baravarankeliny, teny an-davarangana mitafo sy ny lavarangana ny vehivavy.
Nitombo 60 isanjato ny antso vonjy an-telefaonina tao an-drenivohitra Buenos Aires nandritra ireo andro fanombohan'ny fihibohana, hoy i Estela Díaz, Minisitra misahana ny Vehivavy, ny Politikan'ny Miralenta sy ny Fahasamihafana Ara-pananahana ao amin'ny Faritanin'i Buenos Aires ary nisy famonoana vehivavy miisa roa ambin'ny folo teo ho eo farafahakeliny tao amin'ny firenena nanomboka ny 20 Martsa ka hatramin'ny 2 Aprily araka ny FTMF=ONG La Casa del Encuentro. Niteraka fahatezerana ny nahitana ny fatim-behivavy iray sy ny zanany vavy 7 taona tao Lanús (tanàna iray any atsimon'i Buenos Aires) izay nanjavona ny alin'ny 25 Martsa.
Voalaza amin'ny antsipiriany kokoa ato anatin'ity lahatsoratra FiloNews ity ny tranga rehetra momba ny famonoana vehivavy izay nitranga nandritra ny 10 andro voalohany tamin'ny fihibohana.
#Ruidazo manohitra ny famonoana vehivavy sy ny herisetra noho ny fankahalana vehivavy.
Manoloana izany fitomboana manaitra amin'ny fangatahana fanampiana izany sy ny olana atrehan'ireo niharam-pahavoazana amin'ny antso an-telefaonina rehefa eo akaiky ireo mpihoa-pefy dia nanolotra fantsona hafa tao amin'ny WhatsApp sy mailaka ny Minisiteran'ny Vehivavy, ny Miralenta sy ny Fahasamihafana. Napetraka ihany koa ny teny hoe “maska mena” (barbijo rojo) ho teny miafina hangatahana fanampiana any amin'ny fivarotam-panafody manerana ny firenena.
Miantso ny fanohanana bebe kokoa ny Feminista ary mitaky ny handraisan'ny governemanta andraikitra amin'ny herisetra mifototra amin'ny miralenta. Nandritra izany fotoana izany, maro ny fikambanana no nanome hotely mba hiarovana ny vehivavy amin'ny tranga henjana, saingy tsy ampy ny toerana vonona ho amin'izany.